Dôketisma - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Doketisma)
Ny dôketisma na dôsetisma dia fampianaram-pinoana niseho tamin' ireo taonjato voalohandohany nampisy ny fivavahana kristiana izay milaza fa i Jesoa dia tsy nanana vatana tena izy fa zavatra miseho ety ivelany fotsiny izany. Nohelohin' ny Fiangonana izany fampianarana izany ka isan' ireo ataony hoe fampianaran-diso na finoan-diso (grika: heresia).
2 Fiantraikan' ny filôzôfian' i Platôna
3 Endrika samihafan' ny dôketisma
4 Fanamelohana ny dôketisma
Ny teny nohagasina hoe dôketisma dia avy amin' ny matoanteny grika hoe δοκεῖν / dokein ("miseho") sy ny anarana grika hoe δόκησις / dokêsis ("fisehoana" na "matoatoa"). Ny hoe dôsetisma kosa dia fanagasiana ny teny frantsay hoe docétisme na ny teny anglisy hoe docetism izay avy amin' io teny grika io ihany koa.
Fiantraikan' ny filôzôfian' i PlatônaModifier
Izany fandavana ny maha olona tokoa an' i Jesoa Kristy izany dia misy ifandraisany amin' ny foto-kevitra filôzôfika doalista izay mampifanohitra ny zavatra azo tsapain-tanana (na raha) amin' ny fanahy. Araka ny filôzôfia platônisiana sy neô-platônisiana dia mifanohitra ny raha (latina: materia; grika: ὕλη / hulê) sy ny fanahy (latina: spiritus; grika: πνεῦμα /pneuma) satria ambany ny raha fa ny fanahy kosa dia ambony lavitra. Noho izany ny mpomba ny dôketisma dia milaza fa Andriamanitra dia tsy afaka hikambana amin' ny raha. Laviny araka izany ny fandraisana ara-bakiteny ny voasoratra ao amin' ny Evanjelin' i Joany (Joa. 1.14) izay manambara ny fahatongavan' ny Teny ho nofo.
Endrika samihafan' ny dôketismaModifier
Miseho amin' ny endrika maro izany fampianarana izany: ny sasany mandà ny maha olombelona an' i Jesoa, ny hafa kosa manaiky ny fahatongavany ho nofo nefa tsy mino ny fijaliany ka milaza fa nandresy lahatra ny iray amin' ireo mpianany i Jesoa mba hisolo toerana azy eny amin' ny hazo fijaliana ka mety ho i Jodasy na i Simôna izany; ny hafa indray dia mihevitra fa manana vatana ara-panahy tsy tsy mahatsapa fijaliana i Jesoa.
Fanamelohana ny dôketismaModifier
Tsy ahitana firesahana mivantana momba ny dôketisma ny ao amin' ny Testamenta Vaovao nefa nahazo vahana io fampianarana io tamin' ny taonjato faha-2 sy faha-3, tamin' ny nifanojoany amin' ny gnôstisisma izay nifanohana aminy. Ireo Rain' ny Fiangonana (na Aban' ny Eglizy) tamin' ny fotoan'androny dia nanohitra mafy ny dôketisma, indrindra fa i Ignatio avy any Antiôkia sy i Ireneo, nanomboka tamin' ny fiandohan' ny taonjato faha-2.
Notsipahin' ny mpivory tamin' ny Kônsily voalohany tao Nikea tamin' ny taona 325 ny dôketisma. Taty aoriana dia nanameloka ny dôketisma ny Kônsily tao Kelkedôna tamin' ny taona 451. Ny Fiangonana katôlika sy ny Fiangonana ôrtôdôksa Tatsinanana sy ny Fiangonana ôrtôdôksa kôptan' i Aleksandria ary ny Fiangonana ôrtôdôksa teoahedo dia manao ny dôketisma ho fampianaran-diso. Manao torak' izany koa ny ankamaroan' ny fiangonana kristiana hafa izay nandray ny fehin-kevitr' ireo kônsilin' ny Fiangonana tany aloha.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Dôketisma&oldid=1013444"
Dernière modification le 8 Aogositra 2021, à 10:43
Voaova farany tamin'ny 8 Aogositra 2021 amin'ny 10:43 ity pejy ity.